Yahoo Messenger, adeegga fariimaha adeegga faafa ee casriga ah, ayaa loo heli karaa barnaamijka casriga ah iyo qayb ka mid ah software-ka Yahoo Mail. Kuwa aan rabin in ay soo rogaan app ah si ay u isticmaalaan, Yahoo Rasmiga ah ayaa sidoo kale loo heli karaa sida app ah web laga helo iyada oo browser ah. Waxaad ku gashaa isla shahaadada Yahoo ee aad isticmaasho si aad u hesho adeegyada shirkadaha kale.
Saxiixa Ku-galka Yahoo Web Bari
Si aad u bilowdo Yahoo Web Messenger:
Ku dhaji Yahoo Messenger.
Xulo xiriirka bogga ku yaala ama ka bilow internetka . Tani waa shaashadda aad ku gasho xisaabtaada Yahoo. Haddii aadan haysan xisaab, waxaad abuuri kartaa mid.
Waxaa laguu sheegi doonaa inaad ku qorto cinwaanka emailkaaga iyo lambarkaaga sirta ah, oo laga yaabo in aad horey u buuxisid haddii aad horay u saxiixday Yahoo ka computer ka hor.
Sheekeysiga isticmaalka Yahoo Web Messenger
Markaad gasho, waxaad arki doontaa liiska xiriiryaha dhanka bidix ee shaashaddaada. Waxaad sidoo kale raadin kartaa xiriiro gaar ah adoo isticmaalaya meesha raadinta ee dhinaca sare ee bidixda.
Riix icon icon si aad u bilowdo wada hadal. Waxaad ku dari kartaa madadaalada GIF-yada, sawirrada , ama sawirradaada adigoo ku isticmaalaya sheekada iyada oo la adeegsanayo fursadaha hoose ee shaashadda.
Saxiixa In Yahoo Messenger Isticmaalka Lambarka Telefoonka
Waxaad sidoo kale saxiixi kartaa adoo isticmaalaya lambarka telefoonka ee la xiriira koontadaada.
Hubi inaad haysatid app mobile-ku rakibay. Ka soocaan Apple iTunes ee aad iPhone, ama Google Play for Android aad.
Xaqiiji Muhiimadda Furaha Account wuxuu awood u leeyahay inuu ku sawiro sawirkaaga ku yaal dhinaca midigta sare ee shaashadda marka appku furan yahay ka dibna ku soo xushay doorka muhiimka ah ee Account . Qoraalka Mashruuca Yahoo Account Key ayaa la soo bandhigi doonaa haddii muuqaalku diyaar u yahay inuu isticmaalo. Haddii aysan ahayn, raac dareenada si aad u dhaqaajiso.
Hadda waxaad xaqiijisay in aad haysatid goobaha saxda ah ee kuugu soo noqda shabakada internetka. Uma baahnid inaad mar labaad dhammeystirto tallaabooyinkaas.
Geli lambarka taleefankaaga gudaha goobta login. Waxaad heli doontaa farriin qoraal ah oo kuu sheegaysa inaad ka mid tahay qalab aan ahayn telefoonkaaga.
Furan Yahoo Messenger on qalabkaaga mobile oo aad tagto Key Maqlka adigoo ku sawiraya sawirkaaga bogga midigta sare ee shaashadda, ka dibna ku xoqaya Key Muuji .
Ku dhaji xiriirka aqriya " U baahan codsi aad ku saxiixdo" si aad u hesho code.
Ku qor koodhka aad ku heshay berrinka ku yaal bogga internetka.
Xulashada Furaha Doorashadu waa qaab weyn oo natiijadeeda cusub oo sir ah loo isticmaali karo mar kasta oo aad gashid, xafidaadda xisaabtaada ammaan iyo ammaan.
Sida loo soo diro Fariin Email ah
Baro si fudud Si aad dib ugu soo celiso AOL Email Password
Sidee loo Isticmaalaa Yahoo! Rasuul
Sidee loo xafidayaa shaashadda shaashadda ee AIM Mail ama AOL Mail
Ku dar xiriirada liiskaaga saaxiibtinimo ee Facebook, Snapchat
Tirtir lacagtaada Kik on Android
Sida Loo Beddeli Lahaa AIM Boostadaada ama AOL Email Password
Ka xayirso soo diraha MSN Explorer
Sida loo Qaadayo iyo Isticmaal Saxiixyada Email ee Boostada Windows
Sida loo maareynayo Bandwidth iyo Isticmaalka Xogta ee Chrome ee macruufka
Sidee loo Sameeyaa Cinwaanada MAC si loo Iska Caabsado Qalabkaaga Shabakadaada
Torlock: Wareysi lala yeesho Jack P2P Administrator
Doom-ka 2016-ka Dib-u-eegidda Ciyaarta: Ma inaan iibsadaa ciyaarta ugu dambeysa ee Doom?
Sida Loo Helo, Maaro, Loo Shido Taariikhda Raadintaada
Anigu waxaan Fell u ahay Barnaamijka Xakameynta PC-ga, Hadda Maxay tahay?
Waa maxay Aqoonsiga Apple? Ma kala duwan tahay iTunes iyo iCloud?
Samee Terminalku marwalba waafaqsan yahay Ubuntu Guud
10 Meelaha ugu Sarreeya ee Muuqaalka ah ee Soodejinta ah ee iibsanaya sannadka 2018
GNU Book - Demystising Linux Mashiinka Dhismaha
Sidee loo tiriyaa Google Ads
Sida loo Isticmaalo Gmail Afkaaga
Qalabka Muuqaalka Jirka ee DSLR: Fahmida Length Odorka
Bandhiga iPhone ee Retina: Waa Maxay?
Isticmaalka Kaararka Sawirrada ee Ka Badan Heerka 3D-ga
Sida Loo Beddelo iPhone-gaaga Habboon ee Keydka
Isticmaalida Qalabka DOCTYPE ee Qalabka Maqalka